Maxaa hor is taagay xil ka qaadistii Cumar Finish? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa hor is taagay xil ka qaadistii Cumar Finish?
Duqa magaalada Muqdisho, Cumar Finish, ayaa shalay ka badbaaday shaqo ka raacdeyn, kadib markii ay ku hagoogteen siyaasiyiin iyo dhaqan si dhow ula shaqeeya Ra’iisul Wasaaraha XFS.
MUQDISHO, Soomaaliya – Gudduumiyaha Gobolka Banaadir, ahna duqa Caasimadda, Cumar Maxamed Maxamuud, ‘Finish’ ayaa shalay ka badbaaday xil ka qaadis, kadib markii ay ku hagoogteen siyaasiyiin, madaxweyne Maamul-goboleed iyo odayaal dhaqan oo ku dhow Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta.
Sida ay hore u baahisay Keydmedia Online, [halkaan ka aqrso] wararka la xariiray xil ka qaadista Duqa Caasimadda, ayaa si weyn u xooggaanaa, waxaana si degdeg ah, la isugu yeeray Golaha Wasiirrada, si ugu danbeyn shalay loo raacdeeyo Cumar Finish.
Sidoo kale, xogo hoose oo ay heshay KON, ayaa tibaaxaya in Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, isla ogaayeen raacdada guddoomiyaha, isla-markaana ka heshiiyeen shaqsiga lagu badelayo.
Hayeeshee, arrimaahaas oo dhan ayaa dhanka kale isku rogay daqiiqadihii ugu danbeeyay, kadib markii ay Duqa Caasimadda, ku hagoogteen, siyaasiyiin degaanka ah iyo odayaal dhaqan oo isaga ku heyb ah, si dhowna ula shaqeeya Ra’iisul Wasaaraha.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen ‘Guudlaawe’, ayaa dhankiisa waqti badan ku bixay in laga baaqsado xil-ka qaadista Cumar Finish, wuxuuna arrinkaas u maray Farmaajo oo ay saaxiibo dhow yihiin.
Sida ay KON, u sheegeen xubno ka mid ah howl-wadeennada xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Farmaajo ayaa ugu danbeyn Rooble ku qanciyay in dib loo dhigo xil ka qaadista Finish, taas oo keentay in Ra’iiul Wasaaruhu, uu mid ka mid ah Hay’adaha madaxa banana, [Hay’adda Socdaalka & Jinsiyadaha DF Soomaaliya] uu geeyo shaqsi ay saaxiibo dhow yihiin.
Maxamed Cabdiqaadir Cilmi, oo loo magacaabay xilka Agaasimaha Hay’adda Socdaalka & Jinsiyadaha DF Soomaaliya, waxa ay Ra’iisul Wasaraha is kala soo shaqeeyeen, Ururka Shaqaalaha Caalamiga ah (ILO) halka uu hadda ahaa Madaxa Isku-dubaridka doorashooyinka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Xogaha caddeynaya in Cumar Finish, uu shalay ka badbaaday shaqo ka raacdeyn, waxaa ka mid ah, in Ra’iisul Wasaaraha XFS, uu magacaabay guddi heer Wasiir ah oo qaabilsan ilaalinta iyo ka hortagga in la masuqmaasuqo dhulalka danti guud, taas oo lagu xoojinayay wareegto hore uga soo baxaday Farmaajo, oo si dadban Finish ugu socotay.
Cumar Maxamed Maxamuud, wuxuu ka mid ahaa laguna xasuusan doonaa hoggaamiye kooxeedyadii Muqdisho gubay, Farmaajo, oo lahaa dano siyaasadeed, ayaana xilka guddoomiyaha Gobolka Banaadir u magacaabay bishii August 2019, kadib geeridii AUN, guddoomiyihii ka horreeyay Cabdiraxmaan Yariisow.